Xeer Ilaaliyaha Sacuudiga Oo Dalbaday In Deg-deg Xukun Dil ah Loogu Fuliyo Ragii Dilay Wariye Khashogi – Heemaal News Network
Xeer ilaaliyaha dalka Sacuudiga Sheikh Saud al-Mojeb ayaa dalbaday in dil degdeg ah lagu xukumo shan ka mid ah, kow iyo tobbnakii qof ee gacantooda ku baxay wariye Jamaal Khashoogi.
Xeer Ilaaliyaha ayaa sheegay in ay nimankani cinqaabta ku mutaysteen ku takri fal awoodeed isaga oo sheegay in si axmaqnimo leh loo dilay Jamaal Khashogi , islamarkaana inta sun la duray kadibna cad cad loo jar jaray maydkiisa.
Lix ka mid ah ragii dilka gaysatay ayaa iyaduna xeer ilaalint ku eedaysay in ay ka qayb qaateen dilka.
Masuuliyiinta Turkiga ayaa arintan aad uga cadhooday iyaga oo sheegay in ay tahay danbi wayn, kaas oo lagu qarinayo ama raadkiisa la masaxayo in dacwad lagu soo oogo cidii amarka guud siisay, fuliyayaasha dilkii wariye Khashoogi, iyaga oo dalbaday in ragan lagu maxkamadeeyo dalka Turkiga.
Waxaa sii kordhaya xogaha ku wareegsan qoraaga caanka ahaa ee dalka Sacuudiga Jamal Khashogi oo lagu waayey markii uu 2-dii bishan Oktoobar galay Qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbuul iyadoo saxaafadda Turkigu shaacisay warar cusub oo […]
Boqorka Sucuudiga Carabiya Salmaan Bin C/casiis ayaa martiqaad gaar ah u diray Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo maalinta Axada si wadajir u tagi doona magaalada Jeddah. Ilo diblomaasiyadeed oo […]
Israel Oo Adeecday Codsi Uga Yimid Wadamada Carabta Oo Lagu Xadidayo Kaalmada Turkigu Siiyo Shacabka Qudus
Israel ayaa ka fakareysa inay qaado tallaabo ka dhan ah dhaqdhaqaaqyada hay’adaha Turkish-ka ee gargaarka ka wada magaalada Qudus, si looga hortago saameynta madaxweyne Erdogan, sida uu qoray wargeyska Times of Israel. Arrintan ayaa timid […]